धेरै पढेका ७ नेपाली हिरो, कसले कति पढे ? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १९, २०७८ समय: १७:१८:०१
काठमाडौँ – नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पढाइको आवश्यकता हुँदैन भन्ने आम मानसिकता थियो र केही मात्रामा अहिले पनि छ। त्यसैले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै कलाकारको पढाई अपूरो छ । औपचारिक रुपमा ठूलो डिग्री हासिल नगरेपनि केही अभिनेताहरू अनौपचारिक शिक्षा अर्थात् स्व-अध्ययनबाट आफूलाई धेरै अगाडि लगेका छन्। औपचारिक शिक्षा तर्फ कुरा गर्ने हो भने कमै मात्र अभिनेताहरुले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । अब नेपाली चलचित्र जगतमा धेरै पढेकाहरुको सूचीको परेका १० अभिनेताको कुरा गरौं ।
राजेश हमालले भारतको चंडिगढ युनिभर्सिटीबाट अंग्रजी साहित्यमा मास्टर्श गरेका छन् ।
१. राजेश हमाल- ‘युग देखी युगसम्मवाट’ रजतपटमा पाइला टेकेका अभिनेता राजेश हमाल यस्ता अभिनेता हुन् जो आम नेपाली माझ परिचित छन् । उनी सिंहदरबार देखि जनताको झुप्रोसम्म रुचाइएका सुपरस्टार पनि हुन् । राजेशले यस्तो ख्याती आर्जन गर्नुमा उनको औपचारिक अध्ययन पनि साहायक सिद्ध भएको छ । उनले भारतको चंडिगढ युनिभर्सिटीबाट अंग्रजी साहित्यमा मास्टर्श गरेका छन् ।
प्रदिप खड्काले सिक्किम मनिपाल युनिभर्सिटीबाट मार्केटीङमा मास्टर्श गरेका छन् ।
२. प्रदीप खड्का- ‘स्केपबाट’ चलचित्त क्षेत्रमा पाईला टेकेका प्रदीप खड्का युवा पुस्ता माझ चर्चित अभिनेता हुन् । उनले केही समय अगाडी प्रदर्शनमा आएको चलचित्र लिलिबिलीबाट हिटको ह्याट्रिक गर्न सफल भएका छन । स्केपबाट चलचित्र नगरिमा प्रवेश गरेका उनले यसअघि प्रेमगीत र प्रेमगीत २ मा नायक भएर आफ्नो कौशल प्रदर्शन गरिसकेका छन् । उनले सिक्किम मनिपाल युनिभर्सिटीबाट मार्केटीङमा मास्टर्श गरेका छन् ।
राजबल्लभ कोईरालाले पोलीगन कलेजबाट मासकम्यूनिकेसन एन्ड जर्नालिजममा मास्टर्श गरेका छन् ।
३. राज बल्लभ कोईराला- कुनै समय अभिनेता राजबल्लभ कोइरलाको नाम निकै ठूलो सुनिन्थ्योे, फिल्मबृत्तमा । हाल अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका उनले २००७ मा चलचित्र पर्खी बसे बाट रजतपटमा इन्ट्री मारेका थिए । दर्जनौं फिल्मका हिरो कोइराला राम्रो अभिनय गर्ने कलाकारमा दरिन्थे । उनले २०११ मा पोलीगन कलेजबाट मासकम्यूनिकेसन एन्ड जर्नालिजममा मास्टर्श गरेका हुन ।
खगेन्द्र लामिछानेले त्रिभुवन युनिभर्सिटी बाट मास्टर्श गरेका छन् ।
४. खगेन्द्र लामिछाने- चलचित्र बधशालाबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अभिनेता हुन् खगेन्द्र लामिछाने । राम्रो, स्तरिय र बौद्धिक फिल्म खेल्छन् भन्ने छवी बनाएका खगेन्द्र प्रसाद लामिछाने सन् १९९९ देखि रंगमञ्चमा सक्रिय छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा लेखक, निर्देशक, अभिनेताको रुपमा सहभागिता जनाइसकेका उनी खासमा रंगकर्मी हुन् । तर फिल्म क्षेत्रमा पनि उनको योगदान कम छैन । खासगरी पशुपतिप्रसादमा उनले निर्वाह गरेको भूमीका तारिफ योग्य रह्यो । खगेन्द्रले त्रिभुवन युनिभर्सिटी बाट मास्टर्श गरेका छन् ।
सन्दिप क्षेत्रीले त्रिभुवन युनिभर्सिटी बाट मास्टर्श सम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
५. सन्दिप क्षेत्री- चर्चित हाँस्य कलाकार हुन् सन्दिप क्षेत्री । तर उनको परिचय यत्तिमा सीमित छैन । उनले ६ एकान ६ मा नायक भएर अभिनय गरेका छन् । यतिवेला उनलाई फिल्मी अफरहरु आइरहेको स्रोतको दावी रहेको छ । यी हाँस्य अभिनेताले त्रिभुवन युनिभर्सिटी बाट मास्टर्श सम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
दिनेश डिसिले अस्कल क्याम्पसवाट वीएससी सकेर एमवीए गरेका छन् ।
६. दिनेश डिसी- बहुमुखी प्रतिभाका धनी दिनेश डिसी रेडियोकर्मी हुन्, फिल्म निर्देशक हुन् र अभिनेता पनि हुन् । विद्यार्थि राजनीतिवाट सानो पर्दामा आएका डिसीले कुनैवेलाको चर्चित टिभी शो ट्वाक्क टुक्कको निर्देशन गरेर ख्याति कमाएका थिए । उनी फिल्म निर्देशकहरुको संस्था निर्देशक समाजको अध्यक्ष पनि भइसकेका छन् । उनले धेरै फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । उनी सोलो हिरो भएको फिल्म किशोर राना निर्देशित घाम छाँया हो । यस फिल्ममा डिसीले नायिका क्षितिजा शाक्यसँग स्क्रिन सेयर गरेका छन् । डिसीले सरस्वती क्याम्पसवाट एमवीए सम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनले अस्कल क्याम्पसवाट वीएससी सकेर एमवीए गरेका हुन् ।
सुरज सिंह ठकुरीले इनभायरोेमेन्ट एन्ड साईन्समा मास्टर्श गरेका छन् ।
७. सुरज सिंह ठकुरी- कान्तिपुर टिभीको कल कान्तिपुरबाट टिभी यात्रा सुरु गरेका सुरज चलचित्र कर्कश बाट सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । ‘नाइ नभन्नु ल २’ मा अभिनेता भएर देखिएपछि उनले राम्रै चर्चा पनि पाएका थिए । म्यूजिक भिडियोको निर्देशन र मोडलिङका नामी सुरजले इनभयारोेमेन्ट एन्ड साईन्समा मास्टर्श गरेका छन् ।